नर्भिकद्वारा अनुहारको आकृति मिलाउने आधुनिक शल्यक्रियाको शुरुवात « Lokpath
२०७७, १६ चैत्र सोमवार १६:३७
नर्भिकद्वारा अनुहारको आकृति मिलाउने आधुनिक शल्यक्रियाको शुरुवात
प्रकाशित मिति : २०७७, १६ चैत्र सोमवार १६:३७
काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले विभिन्न कारणले बिग्रिएको अनुहारको आकृति मिलाउने अत्याधुनिक शल्यक्रिया सेवाको थालनी गरेको छ ।
जर्मन र ताइवानबाट विशेष तालिम प्राप्त गरी स्वदेश फर्किएका नेपाली चिकित्सकहरुको सहयोगमा नर्भिकले यो सेवाको शुरुवात गरेको हो ।
उच्चतम अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नर्भिकमा डा. किशोर भण्डारी र डा.मनीष बज्राचार्यको टिमले यस्तो शल्यक्रिया सेवा दिन शुरु गरेको हो । यस्तो सेवा नेपालका कुनै पनि अस्पतालले उपलब्ध गराएका छैनन् ।
असामान्य देखिने अनुहारको आकृति आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शल्यक्रियामार्फत मिलाउने यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने नर्भिक देशकै पहिलो अस्पताल समेत बताइएको छ ।
अनुहारको माथिल्लो र तल्लो हड्डीबीचको सन्तुलन कायम नहुँदा देखिने असामान्य आकृतिलाई फेसियल डिफर्मिटिज भनिन्छ । यसको शल्यक्रियाद्वारा गरिने उपचार विधिलाई यचतजयनलबतजष्अ कगचनभचथ भनिन्छ ।
शारिरीक विकास हुने क्रममा अनुहारका हड्डीबीचको सन्तुलन कायम नहुँदा विभिन्न प्रकारका फेसियल डिफर्मिटिज उत्पन्न हुनसक्छन् । जस्तैः अनुहारको माथिल्लो भागको हड्डी चाहिने मात्रामा विकास नहुनु, तल्लो भागको हड्डी अस्वभाविक रुपले धेरै विकास हुनु, च्यूडो बांगिएर अनुहारको आकृति असामान्य हुनु, माथि र तलको दाँतको समन्वय नमिल्दा मुख बन्द नहुनु आदि । यसको अलावा बाल्यकालमा अनुहारमा लागेका चोटपटककको सही उपचार नहुँदा पनि युवा अवस्थामा अनुहारको बनावट असामान्य रुपले विकास हुनसक्छ ।
डा. किशोर भण्डारीका अनुसार सामान्यतया यस्तो अपरेशनअघि दाँतमा ब्रेसेज बाँधिन्छ र अपरेशनद्वारा अनुहारको
माथिल्लो र तल्लो हड्डीलाई नयाँ पोजिसनमा सारी टाइटेनियम प्लेट्स र स्क्रूले फिक्स गरिन्छ । सम्पूर्ण शल्यक्रिया मुखभित्रबाट गरिन्छ, जसले गर्दा अनुहारमा कुनै पनि प्रकारको दाग देखिदैन । यस्तो शल्यक्रिया अवधि ४–६ घण्टाको हुन्छ । शल्यक्रियापछि धेरैमा ३ दिन मात्र अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीले काम, पढाई वा दैनिक कामबाट १–२ हप्तासम्मका लागि विदा लिनुपर्ने हुन्छ । ६ हप्तासम्म झोलिलो खानेकुरा मात्र खानु पर्छ ।
मंगल ग्रहको आकाशमा हेलिकप्टर उडाएर इतिहास रच्दै नासा
काठमाडौं । नासाले भोलि आइतवार मंगल ग्रहको आकाशमा हेलीकप्टर उडाएर इतिहास रच्ने भएको
अब ट्राफिक जरिवाना मोबाइलबाटै तिर्नु सकिने
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवानालाई अझ
बैंक अफ काठमाण्डूले शुरु गर्‍यो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रयोजनका लागि ‘
काठमाडौं । साझा यातायातले विद्युतीय बस खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।